Ghọta Uru Uru Ọ Dị | Martech Zone
Tuesday, April 23, 2013 Tuesday, April 23, 2013 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya anyị nwere ụlọ ọrụ chọrọ ka anyị nyere aka kwalite ikpo okwu ha maka ndị na-etinye ego, ndị isi na ụlọ ọrụ ahụ, na ndị ahịa. Companylọ ọrụ ahụ enweghị ego iji nweta ọrụ anyị n'ihi ya, anyị rịọrọ ka a gbasaa ụfọdụ na pasent nke ego ma ọ bụ uru nke nwere ike ịbịa site na uto ma ọ bụ ọrịre nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ gaghị eme. Ha enweghị ike iche n’echiche na anyị na-arịọ maka nnukwu ihe maka obere mbọ a.
Ewezuga ihe ize ndụ nke ịghara ịkwụghachi ụgwọ maka mgbalị anyị, enwere foto buru ibu karịa nke atụmanya a na-aghọtaghị. Ha anaghị akwụ ụgwọ maka mbọ anyị ga-eme maka ha site na ebe a pụọ, ha na-akwụ ụgwọ maka mbọ anyị na-arụ ọrụ kemgbe afọ 20 gara aga. Anyị nwere otu n'ime netwọkụ kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ n'ihi oge na nlezianya etinye mmekọrịta mmekọrịta na ndị nwere oke isi. Anyị nwere otu blọọgụ kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ n'ihi akụrụngwa anyị tinyegoro kwa ụbọchị ihe dị ka afọ iri. N'aka ozo, anyi anaghi ekewa ugwo na ihe anyi bu eme, anyị na-ekekọta ya na ihe anyị na-ama eme.
Tonweta ndị na-ege anyị ntị, ịnweta nka anyị na ịnweta netwọkụ anyị bara uru. Mana ọ bara uru naanị n'ihi na anyị etinyela ego na ndị na-ege ntị, nka na netwọkụ maka ọrụ anyị niile. Ọ bụ ezie na anyị na-arịọ maka pasent nke nwere ike ibute ọnụọgụ isii, ha na-arịọ maka ịnweta na anyị etinyela ọtụtụ nde dollar.
5% Onu ogugu nke efu
Lọ ọrụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bara uru karịa onwe ha… ọkachasị n'ịntanetị. Jụọ onye ọ bụla nwere ngwa, ha ga-agwakarị gị banyere ụlọ ọrụ ijeri dollar otu ha nọ na ohere maka ngwaahịa ha iji mee ọtụtụ iri ma ọ bụ ọtụtụ narị nde dollar. Ọ bụrụ n ’ha nye 5% nke ụlọ ọrụ otu narị nde ha, nke ahụ bụ $ 5 nde! Kedụ ka anyị ga - esi nweta $ 5?
Nsogbu bụ na ha abụghị otu narị nde dollar ụlọ ọrụ. N'ezie, imirikiti ụlọ ọrụ na-akụ afọ n'ala. Enweghị a-eme nke ọma ahịa-isi, ịbụ ahịa nke ọma na ndị ụlọ ọrụ, na ohere ulo oru mbo, ha na-uru $ 0… n'agbanyeghị nke ulo oru mbo ha mere ka ụbọchị. Na 5% nke 0 bụ $ 0. Ha bara uru $ 0 na-enweghị enyemaka anyị… mana site n’enyemaka anyị, ha nwere nnukwu ohere ịbụ ndị ọzọ.
Mgbe enweghị nkwa inye pasent, anyị ga-ahapụrịrị atụmanya ahụ. Anyị ebula ụzọ mee ka anyị mata otu onye na-agbanwe ihe n'ime netwọkụ anyị nke nwere ike ibute uto ngwa ngwa ma ọ bụ itinye ego. Ha chere na mbọ dị ntakịrị… naanị ozi email nke dugara na ntinye akwụkwọ na blọgụ. Ha anaghị eji eziokwu ahụ eme ihe na email were anyị ọtụtụ afọ iji bia na ihe mere eji kpọọ ha aha bụ n'ihi nsọpụrụ nke ndị nwere mmetụta ọ nwere n'ebe anyị nọ. O were anyị nnukwu ọrụ tupu anyị erute ebe ahụ. Ọ bụ ihe nwute na ha aghọtaghị uru ahụ.
5% nke Nde
Itinye ego 5% nke ụlọ ọrụ n'ime ihe nwere ike ịbugharị ọtụtụ nde dollar bụ obere ego ịme. Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ịga ọtụtụ nde mmadụ pụọ, ee, anyị nwere ike iji ego zuru oke pụọ. Mana ụlọ ọrụ ahụ agaraghị enweta nde ndị ahụ ma a sị na ọ bụghị iji akụ anyị (ihe ọmụma, netwọkụ, ndị na-ege ntị).
Ahụghị m na nke a dị iche karịa onye jiri ọtụtụ afọ dee akwụkwọ ma chọọ ire ya. Ha na-agakwuru onye nkwusa. Onye nkwusa ahụ nwere ahịa, nkesa, na ike mbipụta akwụkwọ. N'ọnọdụ nke ọtụtụ n'ime ego ha nwetara, ha na onye na-ede akwụkwọ na-azụ ahịa. Onye nkwusa bi na nsogbu anaghị eme dollar, mana o nwekwara ike ịme ọtụtụ ihe. Odee ya agaghi ere otu, ma oburu na ha enwetaghi ihe ndi biputara.
Ọ bụ mmekọrịta azụmahịa na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ọrụ yana ọ bụ mmekọrịta azụmahịa na-arụ ọrụ na teknụzụ.
5 Insights Social Data Nkpughe maka azụmahịa gị
Apr 23, 2013 na 10: 14 AM
Mmetụta dị ka nka. O nwere ike iwe naanị nkeji iji tinye akwụkwọ, mana ọ ga-ewe ndụ gị niile iji nweta.
Ọzọkwa karia na ị dị mfe karịa ka ọ na-adị ka ị na-egosipụta site na nke ndị na-enweghị ya.
Ọ dị mfe iwere ihe ọ bụla nke ị nweghị. Ọ dị mfe iwere nke ị na-enweghị ike inweta ozugbo na agbanyeghị ego ole ị na-emefu.
Apr 23, 2013 na 11: 34 AM
Nke a bụ nnukwu ọkwa na ọtụtụ ọkwa….
Nke mbu, ndi ulo oru obula na ndi ndumodu kwesiri iguta ya iji ghota ma jiri uru ha nwere kpọrọ ihe. Ha ga-aba ọgaranya maka ya.
Nke abuo, mmalite obula kwesiri ighota ikike nzuzu di na ikike ya na nkwenye ya maka iwepu ihe ha bu ma obu ime ka uto ha too.
20 afọ gara aga, mụ na otu onye ahịa ama ama na-ahụ maka ịzụ ahịa na-arụ ọrụ ọ bụla ma ọ bụghị ịmekọrịta injinia. Otu n'ime ihe ndị ahụ wetaara ya $ 3 Nde n'otu izu ụka.
Daalụ ọzọ maka nnukwu ihe ncheta na Mmetụta = leverage. Jide ya.